Dorkasy - FJKM Québec - Canada
Home > SAMPANA > Dorkasy
Ny anarana hoe : “DORKASY” dia nalaina avy amin’ny tantaran’ilay vehivavy mpanao asa soa sy fiantrana voalaza ao amin’ny Asan’ny Apostoly 9:36 – 43 atao hoe Tabita. Araka ny voalazan’ny Soratra Masina dia be ny asa soa sy fihantrana nataon’izany vehivavy izany.
Ny Dorkasy dia sampana hiantsoana ny vehivavy rehetra mihoatra ny 15 taona eo anivon’ny fiangonana, na Mpandray ny Fanasàn’ny Tompo na tsia.
Ankoatra ny Asa fitoriana dia ny tarigetran’ny Sampana Dorkasy FJKM dia ny hoe : “asa soa sy fihantrana, fifanampiana ary famangiana”.
Asa fijoroana vavolombelona maro no miandry ny Dorkasy toy ny Asa fanasoavana, Asa sosialy, fifanampiana, sns, izay atao eto anivon’ny Fiangonana sy manerana ny tanànan’i Québec izay nametrahan’ny Tompo ity fiangonana ity.
Isan’ny Asa vinain’ny Sampana ny Hitory sy hanambara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy ary hanolokolo sy hitaiza ny tanora sy ny ankizy ary ny olon-dehibe amin’ny alalan’ny fampivoarana ny vehivavy amin’ny lafiny rehetra (saina, vatana, fanahy).
Hiditra Mpikambana Dorkasy aho
Birao ny Sampana Dorkasy
Maria Ramaholison, Domohina Rabeharitsara, Bako Randriarison, Mirana Razafimandimby, Lolona Raokotobe, Mirana Rajaonimaria, Dina Ravelonananahary
Activité Dorkasy – Parler en public – 24 novambra 2018
22 septambra 2018 – Fivoriambe Dorkasy
Vaovao farany Sélectionner un mois juin 2022 mai 2022 avril 2022 mars 2022 février 2022 janvier 2022 décembre 2021 novembre 2021 octobre 2021 septembre 2021 août 2021 juillet 2021 mai 2021 décembre 2020 novembre 2020 octobre 2020 septembre 2020 août 2020 juillet 2020 juin 2020 mai 2020 mars 2020 février 2020 janvier 2020 décembre 2019 novembre 2019 octobre 2019 septembre 2019 août 2019 juillet 2019 juin 2019 mai 2019 avril 2019 mars 2019 février 2019 janvier 2019 décembre 2018 novembre 2018 octobre 2018 septembre 2018 août 2018 juillet 2018 juin 2018 mai 2018 avril 2018 mars 2018 février 2018 janvier 2018 novembre 2016 octobre 2016